Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Steeti kacha enweghị ụra na US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Utah, Hawaii, Idaho, Kentucky, New Mexico: Steeti kacha enweghị ụra na US
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Tourism • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Hawaii bụ steeti nke abụọ enweghị ụra na US.
Ekpughere Hawaii dị ka steeti America nke abụọ na-enweghị ụra, ka Google siri kwuo.
Ihe omuma ohuru choputara na ndi bi na Utah na-enwe nsogbu ihi ụra Googling karịa steeti ọ bụla ọzọ na America.
Hawaii na Idaho bụ steeti nke abụọ na nke atọ enweghị ụra n'otu n'otu dịka ọchụchọ Google siri dị.
Hawaii bụkwa steeti nke nyochara 'Otu esi ehi ụra' nke atọ kacha elu.
Nnyocha ndị ọkachamara n'ụra nyochara Google ọnọdụ data iji mepụta ndeksi iji guzobe ọkwa nke steeti na-ehi ụra kacha nta ma na-achọ enyemaka kacha.
Okwu ndị a mụrụ gụnyere, 'Enweghị m ike ihi ụra', 'Otu esi ehi ụra', 'enyemaka ụra' na 'ụra ka mma'.
Utah Googled nsogbu ụra na nsogbu karịa steeti ọ bụla ọzọ na America, na-achọ nsogbu ihi ụra na ọnụego dị elu karịa steeti ndị ọzọ. Ndị bi na Utah googled 'Otu esi ehi ụra' karịa steeti ọ bụla ọzọ na US.
Hawaii bụ steeti nke abụọ na-enweghị ụra na America nwere akara index nke 24. Nke a na-abịa n'ihi Hawaii bụ steeti Googled 'Enweghị m ike ịrahụ ụra' nke abụọ kachasị na steeti iri ise niile. Hawaii bụkwa steeti nke nyochara 'Otu esi ehi ụra' nke atọ kachasị elu, na-ebute nkezi Google na-enweghị ụra na-achọ steeti ahụ.
Idaho bụ steeti nke atọ enweghị ụra na US dịka Google ọchụchọ. Idaho choro 'Otu esi ehi ụra' n'olu nke abụọ kachasị elu nke steeti ọ bụla ebe ọ na-achọkwa 'Enweghị m ike ịrahụ ụra', nke atọ kachasị elu nke steeti ọ bụla, na-enye aka na akara ụra ha.
New Hampshire chọrọ okwu ahụ bụ 'Enweghị m ike ịrahụ ụra' nke kachasị n'ime steeti iri ise niile, mana ọ na-achọ okwu atọ ndị ọzọ na-enweghị ụra dị obere ma e jiri ya tụnyere, na-enye steeti ahụ akara n'ozuzu enweghị ụra nke 84 - na-eme ka ọ bụrụ nke iri na asaa nke enweghị ụra. steeti na America.
Ndị bi na North Dakota Googled 'Ụra ka mma' karịa steeti ọ bụla n'agbanyeghị na-egosi na ha bụ otu n'ime steeti ndị na-adịghị ehi ụra nke ọma, n'ogo dị ka steeti 41st kasị enweghị ụra nke nwere akara 138 enweghị ụra nke ọma ma e jiri ya tụnyere Utah 23.
Steeti kacha enweghị ụra na America, ka Google siri kwuo: